दाँत सडिएको छ ? यी घरेलु ओखतीले निको हुन्छ
Home/स्वास्थ्य जिवनशैली/दाँत सडिएको छ ? यी घरेलु ओखतीले निको हुन्छ
खानेकुरा टुक्राउन र पचाउनमा केही समस्या पक्कै हुन्छ । त्यसैले दाँतको स्वास्थ्यलाई निकै ध्यान दिनुपर्छ ।
क्याभिटी भएमा दाँत दुख्ने तथा दाँतमा क्षति पुग्ने गर्छ । यद्यपी, केही घरेलु उपाय अपनाएर प्राकृतिक तरीकाले नै क्याभिटीको समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ ।
नुन द्धारा क्याभिटीको समस्या कम गर्न एक चम्चा नुनलाई तातो पानीमा मिसाएर कुल्ला गर्नुपर्छ । समस्या कम नभएसम्म यस प्रकि्रयालाई दिनमा तीन पटक दोहर्‍याउनु पर्छ । यसबाहेक, आधा चम्चा नुनलाई थोरै सरस्यूको को तेल र कागतीको रसमा मिसाएर यसको लेपले गिजामा मसाज गर्नुपर्छ । दाँतको व्याक्टेरिया नष्ट गर्न यस उपायलाई केही दिनसम्म दिनमा दुई पटक दोहर्‍याउनुपर्छ ।
एन्टी व्याक्टेरियलको साथ एन्टीबायोटिक गुणका कारण लसुनको प्रयोग क्याभिटीमा प्रभावकारी मानिन्छ । लसुनले दाँत टुक्रने तथा क्याभिटीको समस्या कम गर्न मद्दत गर्नुका साथै दाँतको दुखाईबाट समेत राहत दिलाउँछ । र, दाँतलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
अमेरिकन केमिकल सोसाइटीको जर्नल अफ नेचुरल प्रोडक्टमा प्रकाशित एक लेख अनुसार जेठी मधुमा रहेको एन्टी व्याक्टेरियल तत्वले दाँतमा क्याभिटीको विकास हुन दिदैन । साथै, दाँतमा काई लाग्न नदिएर दाँतलाई स्वस्थ राख्दछ । जेठी मधुको जरालाई धुलो बनाएर मञ्जनको रुपमा दाँतमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, मुलेठीको डाढलाई टुथब्रशको रुपमा पनि दाँतमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
निमको पात पनि क्याभिटीको उपचारमा प्रभावकारी तथा लोकपि्रय मानिन्छ । यसमा रहेको एन्टी व्याक्टेरियल गुण व्याक्टेरियाले दाँतमा क्याभिटी हुन दिदैन । र, भएको छ भने पनि उक्त समस्यालाई हटाउन मद्दत गर्दछ ।
वाथ रोगले बिगार्छ हड्डी, मासु, नशा र मुटु (१८ लक्षण यस्ता छन्)
मेवाले हटाउँछ चाउरीपना, काँक्रोले दिन्छ चमकता- अन्य ७ घरेलु टिप्स
एकपटक पढ्नैपर्छ, एउटा पेटभित्रको बच्चीको मार्मिक आत्मकथा । पढीसकेपछि शेयर गर्नुहोला ।